faafaahin: Raisal Wasaaraha oo so Gaba-gabeeyey Kulamadii uu la lahaa Madaxda Galmudug unasii gudbay Magaalada Garoowe. – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
faafaahin: Raisal Wasaaraha oo so Gaba-gabeeyey Kulamadii uu la lahaa Madaxda Galmudug unasii gudbay Magaalada Garoowe.
by admin 27th November 2015 089
Raisal Wasaaraha Soomaaliya oo barqanimadii maanta Gaaray magaalada Cadaado ayaa goordhaweyd ka duulay garoonka Diyaaradaha ee Degmadaasi, isagoo kusii jeeda Magaalada Garowe ee Xarunta Gobolka Nugaal.
Mr Sharmaake Raisal Wasaaraha Dalka ayaa u duulay garowe kadib markii uu cadaado kulamo kula qaatay Hogaamiyayaasha Galmudug waxayna kawada hadleen sidii looga baaqsan lahaa dagaal markale ka dhaca magaalada Gaalkacyo.
dhinacooda Maamulka galmudug ayaa Raisalwasaaraha ka balanqaaday joojinta Dagaalkaasi, waxaysa hoosta ka xariiqeen ineysan u dulqaadan doonin duulaan markale uu maamulka Puntland kusoo qaado dhulka ay Maamulaan galmudug.
Raisalwasaraha ayaa lafilayaa si lamid ah sida galmudug inuu dhinacooda Maamulayaasha Puntland kala hadli doono joojinta colaadaha kajira magaalada Gaalakcyo.
wixii kusoo kordha kala soco wararkeena dambe hadii alle idmo
Top News: Wasiir Taar-dhuleed oo Sheegay in Wasiir ka tirsan Puntland uu kala kulmay arimo uusan ka fileynin.
XOG:- Madaxwaynaha Somaliya oo Saxiixay dhismaha Maamul Goboleed loo samayo Sanaag, Sool iyo Deegaanada Cayn
admin 6th January 2016 6th January 2016
Daawo:Sawirada Beesha waceysle oo qaadacday shirka Maamul u sameynta gobolada dhexe
Dhageyso: Colaad ka jirta deegaano ka mid ah Maamulka.